Index - Rikoooo - #30 बाट परिणामहरू
तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्
प्रश्न तपाईं हामीलाई भन्नुहोस्
2 वर्ष5महिना पहिले #538 by Gh0stRider203
त्यो यो lol हुनेछ
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 19
2 वर्ष5महिना पहिले #539 by Colonelwing
स्वागत छ तपाईंलाई ,,,
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 1
2 वर्ष4महिना पहिले #604 by Ricbru
मेरो नाम रिक (रिकब्रु) संयुक्त राज्य अमेरिका, मिठो टेनेसी हो। अझै मेरो पहिलो प्रेमको पीछा गर्दै। .. अब 40 + वर्ष को लागी। उडान को आनन्द। .. पहिले र मलाई मात्र प्रेम।
2 वर्ष4महिना पहिले #608 by Gh0stRider203
रिकब्रुले लेखेका थिए: नमस्कार सबै,
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: Ricbru
2 वर्ष 1 महिना पहिले #728 by AJT67
हाय सबैलाई, बोर्ड मा हुन राम्रो छ।
मेरो नाम एन्ड्र्यू हो, म 50 वर्ष पुरानो हो, म फिक्स वि wing्ग पीपीएल समातछु, र म सबलोगिकको दिनदेखि सिमुलेटर फ्यान हुँ। दिनको क्रममा म एक कम्प्युटर समर्थन टेक्नीशियन, र नेटवर्क प्रशासकको रूपमा काम गर्दछु।
म हाल पर्थ, पश्चिमी अस्ट्रेलियामा बस्दछु, तर म अब बालीमा बसाई नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न को लागी विचार गर्दैछु।
मूल रूपमा लन्डनबाट। उडान सिमुलेटरहरूसँग गर्नका लागि सबै चीज मन पराउनुहोस्, चिमटाउने र चीज फिक्स गर्नेमा राम्रो गर्नुहोस्, तर रीपेन्टिंगमा फोहर ... lol
अझै जिम जानुहोस्, दस पिन बलिling, तीरंदाजी, पौडी खेल्ने, र ह्यान्डगनहरू गर्नुहोस्।
अनुमान गर्नुहोस् कि म हो ....
2 वर्ष2सप्ताह पहिले #756 by Skycamel
नमस्ते, म बेल्जियमबाट लुक छु। म एक सेवानिवृत्त टेलिकम ईन्जिनियर हुँ र विश्वभर काम गरें। अब मसँग पुरानो जोश, फ्लाइट सिम्युलेटर लिनको लागि समय छ।
मेरो मुख्य रुचि फोटोहरू यथार्थपरक दृश्यहरू हुन् जहाँ म बस्दछु स्थानहरूको भ्रमण गर्न, तर प्राय: जसो मैले पहिले नदेखीएको ठाउँहरू खोजी गर्न।
1 वर्ष 1 महिना पहिले #1146 by luisr2395
म एक नयाँ सदस्य हुँ र जम्बो हुँ र सफ्टवेयरको साथ दान गरीदिनुहोला। तर अझै पनि मेरो हवाई प्लस पासवर्डको लागि पर्खँदै। के कसैले यो सन्देश रिले गर्नेछ? हामीसँग सम्पर्कको माध्यमबाट सन्देश पठाउन म असक्षम भएको छु।
अझै पनी वास्तविक उडान गर्न सिक्दै।
1 वर्ष 1 महिना पहिले #1154 by alogie
मेरो पहिलो सिम स्पेक्ट्रम उडान सिम्युलेटर थियो। ग्राफिक्स ZX81 भन्दा राम्रो थियो तर यो रनवे देखा पर्दा दर्दनाक थियो, पहिले एक पिक्सेलको रूपमा, त्यसपछि दुई आदि।
1 वर्ष 1 महिना पहिले #1158 by Gh0stRider203
luisr2395 ले लेख्यो: म एक नयाँ सदस्य हुँ र जम्बो हुँ र सफ्टवेयरको साथ दान गरीदिनुहोला। तर अझै पनि मेरो हवाई प्लस पासवर्डको लागि पर्खँदै। के कसैले यो सन्देश रिले गर्नेछ? हामीसँग सम्पर्कको माध्यमबाट सन्देश पठाउन म असक्षम भएको छु।
हो, म हाकिमलाई थाहा दिन्छु! तपाईं पनि Rikooo FB पृष्ठमा पोस्ट गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, वा तिनीहरूलाई त्यहाँ एक चित्र पठाउन। तपाईंलाई दु: खको रूपमा आवश्यक पर्ने मसँग पहुँच छैन, वा तपाईंसँग यो थियो
7 महिना5दिन पहिले #1368 by उडान
नमस्ते, म यो फोरममा नयाँ हुँ। मेरो बारेमा थोरै: म 49 बर्षमा बहिरा मानिस हुँ जो नर्वेको बर्गेनमा बस्दछु।
मैले मेरो पहिलो एफएस एक्सएनयूएमएक्स प्रयोग गरेको छु र बिभिन्न माइक्रोसफ्ट उडानहरू थिए जबकि अन्तिम माइक्रोसफ्टका वर्षहरू थिए FSX। एन्टोनोभ एएन-एक्सएनयूएमएक्स र अन्य प्लेन जो डिजाइन गरिएको थियो + नयाँ प्यानल र हेलिकप्टर (कामोभ केए-एक्सएनयूएमएक्स) FS14 का लागि जो सबै तयार थिए पूर्व उडान वेब साइटमा गायब। र मसँग अन्तिम लडाई उडान सिम एक्सएनयूएमएक्स छ (पहिलो सीएफएस र सीएफएसएक्सएनयूएमएक्स (प्रशान्त थिएटर थियो)। यसको सम्बन्धमा नयाँ र सहयोगी सल्लाहहरूको पूर्ण पाठ सिके। Prepar3D मेरो पछि FSX विन्डोज 10 मा लामो समय सम्म काम गरेन जब म नयाँ डाउनलोड गरे पछि वेब साइटमा आएँ Prepar3D "एकेडेमिक" र सिकेको म भित्र उड्न धेरै सन्तुष्ट छु P3D। तर माइनस मा P3D: त्यहाँ METAR बाट लग बुक र वास्तविक मौसम छैन P3D.
त्यसोभए सामान्यतया म हराइसकेका गेजहरूका लागि उपकरणहरू फेला पार्न सन्तुष्ट हुन्छु जुन पुन: प्राप्ति हुन्छ जहाँ म विमान / हेलिकप्टरबाट सारियो FSX लाई P3D र नयाँ विमानहरू आदि को लागी धेरै पाउन P3D यहाँ वेब साइट मा।
सादर जेन्स Eirik Skogstad।
बोर्ड श्रेणियाँ Rikoooo बारे - नयाँ सदस्य स्वागत - सुझाव पेटी - घोषणा उडान अनुकरणहरू फोरम - FSX - FSX भाप संस्करण - FS2004 - Prepar3D - X-Plane मिडिया - स्क्रिनसटहरू - भिडियो हैंगर टक - फ्लाई धुन - के र जहाँ तपाईं आज उड गरे - रियल उड्डयन अन्य उडान सिमुलेटर - उडान गियर उडान सिम्युलेटर - - FlightGear बारे - DCS SERIES - बेन्चमार्क Sims
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.701 सेकेन्ड